JUNE&MAY: #သားလေးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်
ဆရာဝန်က ...'ကလေးနာမည်' လို. မေးတယ်..
တို.လည်း ' Edwin Wang'လို.ဖြေလိုက်တယ်....
ဆရာဝန်က....'အဖေ နာမည် '.......မေး...
တို.လည်း ' Min Min Htun' လို.ဖြေ....
တို.လည်း... 'Min Min Htun ကအမှန် ပါလို.' ဖြေ.....ဆက်ပြီး
တို.လည်း 'May be Ok.He also has Myanmar name' လို. ဖြေလိုက်တယ်။
Posted by JuneOne at 6:59 AM
fri January 6, 2009 at 12:08 PM
sin dan lar January 6, 2009 at 2:14 PM
juneone January 6, 2009 at 9:45 PM
ThuHninSee January 7, 2009 at 3:05 AM
တူအငယ်လေးမှာ အိမ်နာမည်ပဲရှိတယ်။ အပြင်နာမည်ကို ရွေးကြတုန်း။
အိမ်နာမည်ကလဲ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး။ သားအငယ်မို့ သားငယ်လို့